सोधनान्तर घाटा अझै पौने ७ अर्ब - Naya Patrika
सोधनान्तर घाटा अझै पौने ७ अर्ब
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४
आयको तुलनामा व्यय धेरै भएपछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र लगातार दोस्रो महिना घाटामा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालको शोधनान्तर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो गत मंसिरमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले नकारात्मक थियो ।
व्यापारघाटा उच्च रूपमा बढ्नु तथा रेमिट्यान्स आय घट्नुले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको हो । समीक्षा अवधिमा मुलुकको व्यापारघाटा १५.१ प्रतिशतले बढेको छ भने रेमिट्यान्स आय ०.५ प्रतिशतले घटेको छ ।
आयात १५ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात वृद्धिदर १३.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पर्यटन आय वृद्धिदर २.९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचांक नकारात्मक देखिएका कारण मुलुक घाटामा गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । आयातमा उच्च वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा कमी आई चालू खाता घाटामा गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो
२०७४ असार मसान्तको रु. १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ०७४ पुस मसान्तमा १.१ प्रतिशतले कमी आई रु. १०६७ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । योे विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.२ महिनाको वस्तु आयात र १०.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मूल्य वृद्धि ४ प्रतिशत
०७४ पुस महिनामा ४ प्रतिशत रहेको छ । ०७३ पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा खाद्यान्नको मूल्यमा भएको केही वृद्धिको कारण समग्र मुद्रास्फीति गत वर्षको तुलनामा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस अविधिका खाद्य मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशत र गैरखाद्य मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत छ ।
विदेशी लगानी दोब्बरले बढ्यो
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को ६ महिनामा नेपालमा ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी आएको थियो ।
त्यस्तै, नेपालमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी आएको वैदेशिक अनुदान पनि बढेको छ । समीक्षा अवधिमा ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको खुद पुँजीगत ट्रान्सफर (पुँजी निर्माण हुने अनुदान) आएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४को पाँच महिनामा नेपालमा ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खुद पुँजीगत ट्रान्सफर भित्रिएको थियो ।